N'ogbe FEELM meriri iF Design Award 2020 ohuru atomization technology ika. ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị nrụpụta | NTOKWU
FEELM meriri iF Design Award 2020 ohuru atomization technology ika.
Na okwu gbasara gburugburu ebe obibi nke sịga na-anata nsogbu ndị ọzọ, ọ bụ ozi ọma na ụfọdụ ndị nrụpụta na-ewere ya nke ọma na omume ha. Akwụkwọ sịga Disposable E-cigare, onye mmeri nke onyinye 2020 iF, bụ ọrụ nke FEELM, ụdị teknụzụ atomization na-agbanwe agbanwe.
Ngwaahịa FEELM na-egosipụta akwụkwọ ọhụụ eco-enyi na enyi, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-emebi emebi na ọnụọgụ 76% na olu ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ndị plastic. Ọzọkwa, a na-eji ụdị mpempe akwụkwọ na-akpụgharị ọtụtụ akwụkwọ site na ịdị ọcha na ọrụ mmekọrịta. Enwere ike ịdọpụ akwa oyi akwa nke ọnụ na-emechi tupu ọ gafere ndị ọrụ 15 na-esote. Nhazi a na-echebe ahụike nkeonwe ma na-agbasa echiche nke nchedo gburugburu ebe obibi n'etiti ndị na-ese anwụrụ ọkụ.
IF DESIGN AWARD bụ asọmpi a ma ama n'ụwa niile na ngwaahịa, nkwakọ ngwaahịa, ụlọ, ọrụ ọrụ, wdg. Enyere ya na 1953, yabụ ihe kasị ochie onwe ha imewe akara na ụwa,ihe nnọchianya nke mmezu ihe eji emeputa ihe nke oma nke na-elekwasị anya na ike ohuru nke imewe.
FEELM na-enye teknụzụ kpo oku ohuru na ahụkebe maka sistemụ pod mechiri emechi. NJOY, RELX, HEXA, Haka, VAPO, Alfapod, na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ bụ teknụzụ FEELM. Ọnụ ahịa ire ere nke pọd na FEELM n’ime ya karịrị otu ijeri.
Otu dị ka Vaporesso na CCELL, FEELMis bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa nọọrọ onwe ha nke Shenzhen SMOORETechnology Limited., Nke bụ ụlọ ọrụ na-eduga na ụlọ ọrụ na-agbapụta ite. E nwere ihe karịrị 400 ọkachamara na SMOORE Research Institute, nwere 1600 patent ụwa.
Banyere Vape na United States na Gburugburu ...
Aptụ Isi na United States na Aro ...
India: Ndi Vapers Ga Emegide Iwu na Sept. 1 ...
Afọ Iri na Decma Vaping Dec 29% na 2020, CDC Sur ...
Kpoo Sịga, E Liquid Alụlụụ Sịga, Newport E sịga, Epen, Okingụ Sịga Ọzọ, E Sịga ọnya Pack,